Governor Iowa Kim Reynolds state keessati nama Covid-19 tiin qabaman jalqabni talaali akka kennamu h | KWIT
Oromo News 12.03.2020
Governor Iowa Kim Reynolds state keessati nama Covid-19 tiin qabaman jalqabni talaali akka kennamu himan.
Akka oduu conference guyyaa har’aati, Reynolds akka jetteti jiraattota bakka nursing home jiraataniif jalqaba Decemeber 13th kan kennamu ta’a. Pyfizer dhaan talaalin 26,000 kan feamu ta’a. Iowa December keessa qoricha talaali baaye dabalataan kan argattu ta’a, talaali Modern irraa dabalate, jia dhumatti waliigalatti qoricha talaali 172,000 kan galu ta’a. talaalichi qoricha lama of keessa kan qabuudha.
Ummani biraa waliigalatti jia 6 keessati talaali argachuu akka hin dandeenne himan.
Torbaan kana keessa waliigalatti November dhumati namni 100,000 dhubaa kan qabaman yoo tau waliigalati kan duan ammo 600 dha. Seati 24 Iowa keesatti namni sababa Covid-19 haarawa due 70 dha. Kunis akka dhukubichi state seene guyyaa tokkoti namni kunmarti du’uu yeroo jalqabaatif kan uumameedha.
Woodbury County keessati nmani dabalataan har’a due 5 yoo tau namni haarawa qabame ammo 146 dha. County torbaan kana qofa namni 19 akka due himte. Kunis waliigalatti namni due 135 kan gahuudha. Akka oduu gaazexa Sioux City tin namni haarawa due 3 gabaaste jirti, Plymouth fi Monona Counties namni lama haaraa akka due gabaaste. Lyon, O’Brien, Ida, and Yankton counties keessati namni haarawa due 1 qofa.
Mannni fayyaa Sioux land akka gabaaseti dhukubsattooni 100 sababa Covid-19 MeryOne Sioux land Medical Center fi Unity Point Health-St. Luke’s, guyyaa kaleessa irraa akka xiqqaate himan. Harka afur irraa sadaffaan sababa Corona virus kan hospitaala galaniidha.
Police Sioux City camera nafaa fayyadamu jalqabamee jira. Abbaasera akka amantii fi dandeete akka beekuf kan godhameedha
Officer martuu kan walfakkaatanidha, School resource officer fi warra qorannoo addaa godham martuu kan qabaniidha. Akka oduu guyyaa har’aati, officer polisa Chief Rex Mueller akka jedhetti poolisoni wayta namaan walgahan maraa kan camera banamu ta’a.